ရေးသားသူ -- ယျာတင်(ရိုဟင်းသား)
အလျှံငြီးငြီး လောင်ကျွမ်းတဲ့ မီးပုံထဲမှာ
အမုန်းမုန်တိုင်းက အငြိုးကြီးစွာ တိုက်ခိုက်လို့
ချွေးစာတွေနဲ့ ဆောက်ခဲ့တဲ့ နားခိုရာ
သားက အမေ မရှာအားခဲ့လို့
သားအမိ ထာဝရအတွက် ဝေးကွာခဲ့ရတာ။
နှလုံးသားထဲမှာ တစ်ဆစ်ဆစ် နာကျင်ခဲ့တာ။
••• မိတ္တီလာမှ မွတ်စလင်များ အကြမ်းဖက် ညှဉ်းပန်း ချေမှုန်းခံခဲ့ရသော ၂၀၊၃၊၂၀၁၃ ရက်နေ့ ကို အောက်မေ့၍ ရေးဖွဲ့ပါသည်။
လူလူချင်း နှိပ်စက်မှုမှ ကင်းဝေးပြီး ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ။
RB မှ ကူးယူ​ဖော်​ပြပါသည်​။
Posted by MYARF Arakan at 7:04 PM No comments:
Posted by MYARF Arakan at 7:36 PM No comments:
အမေသာရွာလည်၊ မတွေ့ခဲ့ရ . . . .
-သြော် . . . .
ဒေါနှင့်မောနှင့် အပစ်ခံခဲ့ရပြီးကိုး . . . .
-ခုတော့ . . . .
တိုက်ကျွေးမယ့်သူ ဇမ္ဗူမှာရှား . . . .
ရောင်ရမ်း၊ ကိုက်ကဲ၊ နာကျင်မှုပို
ငါအမေဖြင့် ကြိတ်မှိတ်ခံငို . . . .။
အမေ့နို့ကို လာသာစို့ . . . .။
Posted by MYARF Arakan at 4:48 AM No comments:
ကျောက်ပန္ဓူ ရခိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့တရားမျှတမှု၊ မောင်တော။
၆၊ ၉၊ ၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် ရခိုင်အမျိုးသမီး နှစ်ယေက်သည် ကျောက်ပန္ဓူ၊ အာယာလီရွာနေ ရော်ဟိမုလား (ဘ) အဒူဆောလာမ် (အသက်-၃၅-နှစ်)၏ ကွမ်းခြံမှ ကွမ်းရွက်များခိုးနေသည်ကို တွေ့မိသဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေး မှူး အားတိုင်တန်းခဲ့ရာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ကွမ်းခြံပိုင်ရှင်ထံမှ အပြန်ငွေကျပ် တစ်သောင်းညှစ်ယူပြီး ခိုးယူ လာတဲ့ ကွမ်းရွက်များကိုလည်း သူခိုးမများအားပေးလိုက်သည်။ ၎င်းအမျိုးသမီးနှစ်ဦးသည် တိုင်းရင်းသား များဖြစ် ကြသည်။ တိုင်းရင်းသားများအတွက် တိုင်တန်းခြင်းမပြုလုပ်ရဟု သတိပေးလိုက်သည်။ ရခိုင်များ သည် ရိုဟင်ဂျာများ၏ ကွမ်းခြံ၊ ဟင်းခင်း၊ ဆိတ်၊ နွားများကို အမြဲလိုလိုပင် ခိုးယူလေ့ရှိသည်။ တိုင်တန်းသော် လည်း မည်သို့မျှထူးခြားမှုမရှိခဲ့ချေ။
Posted by MYARF Arakan at 9:05 PM No comments:
၂၇၊ ၉၊ ၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် အင်းဒင် နှင့် သ၀န်ချောင်းကျေးရွာများ၏ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့် ရပ်မိရပ်ဖများ ကို အစည်းအဝေးခေါ်ကာ သင်တို့သည် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများထံမှ ရယူသော လက်ထပ်ခွင့်ပြု မိန့်စာနှင့် လက်ထပ် ခွင့်ရှိသော်လည်း ကလေးမွေးဖွားခွင့်မရှိ၊ အကယ်၍ ကလေးမွေးဖွားလိုလျှင် ငါတို့ထံမှအမိန့်စာ ရယူရမည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ အကယ်၍ ငါတို့ထံမှ အမိန့်စာ မရဘဲ ကလေးမွေးဖွားလျှင် ၎င်းကလေးများကို အထစ (အိမ်ထောင်စုစာရင်း)၌တင်သွင်းခြင်းခံရမည်မဟုတ်၊ Black List ၌သာတင်သွင်း မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
Posted by MYARF Arakan at 9:02 PM No comments:
၂၅၊ ၉၊ ၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် ဥဒေါင်းကျေးရွာမှ ရိုဟင်ဂျာ နှစ်ဦးသည် ကျောက်ပန္ဓူသို့နွားဝယ်သွားရာ ရခိုင်များက ၎င်းတို့မှာ နွားများရှိသည်ဟုဆို၍ခေါ်သွားခဲ့သည်။ ရခိုင်များနှင့် ဈေးမကိုက်သဖြင့် မ၀ယ်နိုင်ခဲ့ချေ။ ထို့အပြင် ရခိုင်များက ငါတို့နွားများမ၀ယ်လျှင် မင်းတို့ရဲ့အဖြူကဒ်ပြားတွေထိန်းသိမ်းခံရမည်ဟုဆိုကာ ထိန်းသိမ်းလိုက်သည်။ ထိုအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကျောက်ပန္ဓူရှိ စစ်တပ်များအား တိုင်တန်းခဲ့ရာ စစ်တပ်များက ကဒ်ပြားများ ကို ပြန် ယူပေးခဲ့သော်လည်း မည်သည့်အရေးယူမှုများမပြုလုပ်ခဲ့ချေ။
Posted by MYARF Arakan at 8:58 PM No comments:
မောင်တောမြို့၊ အလယ်သံကျော်၌ တာဝန်ကျနေသော SB2 ရဲဗိုလ်လတ် အောင်ကျောင်စိန်နှင့် အခြား SB တစ်ဦး တို့သည် သူတို့၏မွေးစား လမ်းပြဖြစ်သူ အလယ်သံကျော်၊ ဈေးကုန်တန်းရွာနေ ဇာဟိတ်ဟုဆိန်း နှင့် အတူ အလယ်သံကျော်၊ မောင်တူလာရွာရှိ ရီယာအူဒိန်(ဘ)မူဟမတ်အီနုစ် အသက်-၁၈-နှစ်၏ နေအိမ်သို့ ၂၈၊ ၉၊ ၂၀၁၃ ရက်နေ့ ညနေ ၆း၀၀ နာရီအချိန်တွင် လာရောက်၍ ၎င်းသူကို သူ၏ကိုယ်ပိုင် ဆိုင်ကယ် တစ်စီး နှင့်တစ်ပါတည်းခေါ်သွားခဲ့သည်။ ရုံးသို့ရောက်ပြီးစစ်ဆေးကာ အပြစ်ကင်းသောကြောင့် ၎င်းသူကို လွှတ်ပေး သော်လည်း သူ့ဆိုင်ကယ်ကိုထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။
၂၉၊ ၉၊ ၂၀၁၃ ရက်နေ့၌ တဖန် ရောက်လာကာ သူ့ကို သူသည် လူတစ်ဦးအားဆိုင်ကယ်နှင့် တိုက်မိသည်ဟု ဆိုကာ အတင်းအဓမ္မ ငွေ ၈-သိန်း ညှစ်ယူခဲ့သည်။ သူသည် မည်သူ့ကိုမှ ဆိုင်ကယ်နှင့်တိုက် မိခြင်းမရှိခဲ့ချေ။
Posted by MYARF Arakan at 8:55 PM No comments:
‎ · - ခုတ်တွင်ရှင်းလင်း၊ ထူထပ်တောင် ဤ ဒေသ၀ယ်၊ မြို့တည်ထောင် …… - ရွာဟောင်းအမည်၊ မြို့ရွာဟောင်း ...
“ပညာဆိုသည် မြတ်ရွှေအိုး”၊ “ပညာရွှေအိုး လူမခိုး”၊ “အလိမ္မာစာမှာရှိ”၊ “ပညာမျက်စိ လူမသိ” စသည်ဖြင့် ပညာရှင်များက ပညာ၏တန်ဖိုးကို အမ...